Instagram Amafonti: Generator, Izimpawu, Emoji, Online Kopisha Namathisela
Amafonti for Instagram
Engosini yethu uzothola eziningi amafonti amasha ukuze kusetshenziswe Instagram. Kukhona kukhetfwe tinhlobo letibanti letikhetsiwe amafonti for Instagram. Ngaphandle amafonti standard, ungakwazi ukhiqize yimuphi ifonti amahle for Instagram lakho lokuzikhethela. Noma yikuphi okulotshiwe nemibhalo wadala lapha ingakopisheka futhi sifakwe noma imuphi umugqa iphrofayela yakho Instagram, kungakhathaliseki uma kuba igama lakho lomsebenzisi noma isimo, isihloko iphrofayela noma izindaba, ngeposi noma amazwana. Ngaphandle kwalokho, kungenzeka amafonti ahlukahlukene asetshenziswayo endaweni web: waligcizelela, ngokugqamile, omalukeke noma ngena.
Kanjani ukwakha font enhle
Ukuze usebenzise noma iyiphi ifonti amelwe isayithi kuwebhu Iphrofayela yakho ye-Instagram, kuzodingeka ukuba uthayipha umbhalo edingekayo kule site ifasitela ekhethekile bese ukhethe noma iyiphi ifonti oyithandile. Khona-ke uyokwazi ukukopisha Tinhlobo tematheksthi e izincwadi amahle kusuka kusayithi. Ngenxa leliqhinga uzokwazi ukwengeza amafonti entsha ukuze Instagram yakho futhi oyingqayizivele ukuklama iphrofayela yakho. Ukusebenzisa ingosi yethu ungakwazi ukushintsha amafonti e Instagram kokubili isihloko lephrofayela kanye okuthunyelwe kwakho noma imibono.
Ezweni yesimanje uzodinga nezimpawu ezikhethekile ukuze wenze amaposi akho iyingqayizivele ngempela ngenkathi ukubhuloga ku-Instagram. Ngaphandle izinhlobo ezahlukene umbhalo, uzothola nohlu omkhulu fitting izimpawu for Instagram. Ngokwesibonelo, kusukela lapha uzokwazi ukukopisha uphawu umkhaza i-igama lomsebenzisi Instagram. Uzokwazi ukuze ukopishe izimpawu Instagram ongathanda ukuze ungeze iphrofayela yakho kusuka ingosi yethu.
Ukuze uhlele okuqukethwe kwakho ngenkathi ukubhuloga ku-Instagram kufanele wazi kungenzeka bangaki izimpawu esetshenziswa ngenkathi kubhalwa okuthunyelwe Instagram, ngokugcwalisa igama noma iphrofayela isihloko. Ngakho, ingabe okuthunyelwe Instagram babe bangaki izimpawu?
Instagram kuyinto yokuxhumana esengeziwe sezithombe kuka imibhalo; Ngakho-ke, ivolumu okuthunyelwe kukhawulwe. Umkhawulu 2.200 nezimpawu ngeposi ngalinye. Futhi ingabe isihloko iphrofayela zihlanganisa bangaki izimpawu? Kuzodingeka ukuthi uvumelane nemininingwane edingekayo izimpawu 150 ukuze ungeze ulwazi lwakho isihloko iphrofayli. Ukukhulunyelwa komBhalo e Instagram ube umkhawulo uphawu kanye: ngeke ukwazi ukubhala amazwana izimpawu esifushane kuka ezimbili kanye nezimpawu isikhathi eside kunaleso 1,000.
Ungakha futhi emoji ahlukahlukene Instagram engosini yethu. Ungakwazi ukwengeza emoji wadala engosini yethu kuwo womabili okuthunyelwe Instagram nezindaba.
Isayithi Ubuye umsebenzi wokudala izithonjana engajwayelekile Instagram. Ungathola omkhulu mzwelo inhlanganisela ngencazelo iphrofayli. Iphethini ngokunezela izithonjana kokuthunyelwe noma izindaba kufana eyodwa esetshenziselwa imibhalo kanye emoji: isithonjana kufanele wanezela kusuka site web kwenanyekwe ku-Instagram.
Umqondo wokusebenza isayithi kuwebhu kusekelwe ukudalwa nezitayela ezihlukahlukene usebenzisa ezahlukene Unicode izimpawu. Ngakho ngobuchwepheshe ingosi yethu akudali amafonti, kodwa ihlanganisa Unicode glyph iyahambisana Instagram. Kuyini Unicode Instagram?
Lonke ulwazi nge-computer lilondolozwe ifomethi kanambambili (inhlanganisela ezahlukene amaqanda nabathandekayo). Ngisho umbhalo njengamanje kufundza lilondolozwe at iseva njengoba amaqanda futhi abathandekayo. Ekuqaleni kwenkathi ikhompyutha nomkhiqizi ngamunye kwadingeka umbono wabo siqu mayelana ikhodi kanambambili ingasetshenziswa ukuze sibonakalise izimpawu umbhalo ahlukahlukene.
In the 1980 ikhodi kanambambili ukuthi zilandele izilinganiso ezithile ngenxa Unicode. Unicode kuyinto international Standardization igunya abasebenza sebhithi jikelele umbhalo izimpawu.
Ngaphambi Unicode wabonakala, njalo uhlelo zasebenzisa izindlela zabo yokugcina sinikela umbhalo; Ngakho-ke, ngaso sonke isikhathi uma izinhlelo ezimbili adalwe program ezahlukene kwadingeka ukuba libambisane naye, i-«umhumushi» kwaba ukudaleka.
Ngenxa yokuthi kwathatha ejwayelekile jikelele kwangiphatha yinkimbinkimbi futhi akubona bonke corporations wafuna sendleleni eya ohlelweni esinobunye uphawu umbhalo esephepheni, Unicode kwadingeka ukuba afake isicelo isethi izimpawu ezihlukahlukene ukusekela izinhlelo, kuhlanganise yisikhathi. Ngokushesha inani izimpawu lakhula ngezinga lomchazi, futhi okwamanje kuba ngamakhulu ezinkulungwane. I Izithonjana zimelela umbhalo kanye; Ngakho-ke, zonke izithonjana kokuvela nsuku ukudlula Unicode kanye.
Eyokuqala 128 Unicode izimpawu kukhona izimpawu ASCII okuyizinto alfabhethi Latin. Kodwa-Unicode iqukethe okuningi kuka-128 izimpawu futhi abaningi babo zifane elifunyenwe, kodwa ukungezwani phakathi mayelana incwadi isibindi noma amaphethini. Letimphawu ingasetshenziswa ukwakha «pseudoalphabets» efana abavamile ASCII umbhalo kodwa ukuxabana ezithile: nesibindi kakhudlwana, abhalwe-ithalikhi, nabokhulumile noma ladvwetjelwe!
elithi The «Ifonti» empeleni kusho iqoqo ihluzo elihambisana glyph ahlukahlukene noma ezinye Unicode. Kumelwe ukuba uzwile Sans Comic futhi Arial, okuyizinto amafonti. Izinto eyenziwe ingosi yethu ngenkathi kudalwa imibhalo, emoji noma izithonjana, kanye nolwazi ukuthi ukopishe bese unamathisela, ngenkathi usebenzisa sayithi, empeleni izimpawu ekhona ifonti ngamunye. Ngakho-ke, umbhalo ngomalukeke kanye nezinye izincwadi eminingi udala ukuyisebenzisa Iphrofayela yakho ye-Instagram empeleni izimpawu ehlukile, njenge izinhlamvu ezingu-A no-B, ngokwesibonelo.
Ngakho, kungani lezi amafonti ekhethekile engosini yethu adingekayo? Uma amafonti abavamile bekakhona lapha, ubungeke ukwazi kopisha bese ukunameka! Ngokwesibonelo, awusoze ukwazi ukufaka amanye amagama e Sans Comic ku-Instagram yakho bio, ngoba izimpawu ukukopisha uzobe abavamile ASCII izimpawu kuyobonakala ngaleso amasayithi njengoba kunqunywe umnikazi wesayithi.
Nokho, ngenkathi usebenzisa isethi Unicode izimpawu ezingavunyelwa ibukeke ifonti ethile noma isitayela ezithile (bold, omalukeke, kugcizelelwa noma nabokhulumile, ngokwesibonelo), siyokwazi ukusebenzisa imibhalo enjalo «Lingisa» font enhle kule profile isihloko noma Instagram yakho okuthunyelwe.